The Facebook Times: ၀တ်မှုန်ရွှေရည် နှင့် သတင်းအပေါ် ပြေတီဦး ကို ယုံကြည်စိတ်ချတယ် လို့ပြောသူက အူဝဲ
ဝေဖန်ရေးလုပ်တာလည်း မဟုတ်ဘူး..လေကန်တာလည်းမဟုတ်ဘူး...သတင်းဆို အမိအရတွယ်ချင်တာပဲရှိတယ်..ခုတလော အနုပညာ ရှင်တွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းအရှုပ်တွေ တော်တော်လေး များတယ်ထင်တယ်...တစ်နေ့က မလေးရှားနိုင်ငံထုတ် ဂျာနယ်တစ်စောင်ကို ကောက်ဖက်မိတယ်...၀တ်မှုန်ရွှေည် နှင့် ပြေတီဦးတို့ နှစ်ယောက်ကို ဘာလိုလိုဆိုပြီးရေးသားထားတာဖက်ရတော့ တော်တော်လေး အံ့သြမိတယ်..
တ်မှုန်ရွှေရည် နှင့် ပြည်တီ ဦးတို့ ဟာ ရိုက်ကွင်းထဲမှာသာမကပဲ အပြင်မှာလည်း အမြဲတွေ့လေ့ရှိတယ်လို့ဖေါ်ပြထားပါတယ်...ရိုက်ကွင်းထဲဆိုရင်လည်း ၀တ်မှုန်ရွှေည်တစ်ယောက် ပြေတီဦးအပေါ် ခလေးဆိုးနဲ့ ဆိုးချင်သလိုဆိုးနေတော့ ပြေတီဦးမှာ လူကြားသူကြား ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ ၀တ်မှုန်ရွှေရည် စိတ်တိုင်းကျဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနေရတယ်လို့ အနုပညာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ သတင်းတွေ ပျံနေတယ်လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်...ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အူဝဲ က " ကျွန်မ သူ့ကို(ပြေတီဦး)နားလည်ပါတယ်...သူဟာ အိမ်ထောင်ရေးကို ဘယ်တော့မှ အမည်းစက်စွန်းအောင် မလုပ်ပါဘူး..အိမ်ထောင်ရှင် ကောင်းတစ်ယောက်ဆိုတာ ကျွန်မ ယုံကြည်တယ်" လို့ အဲဒီသတင်းတွေပတ်ပြီး ဖြေကြားထားပါတယ်....အနုပညာရပ်ဝန်းမှာ ဒီလိုသတင်းတွေ ထွက်တာ မဆန်းကြည်တော့ပေမယ့် ဒီသတင်းက နည်းနည်းဆန်းကြယ်နေတယ်လို့ ထင်မိတယ်....၀တ်မှုန်ရွှေရည် တစ်ယောက် အနုပညာလောကထဲမှာ အနုပညာနဲ့အတူ သူ့ရဲ့ နှလုံးသားအစုံကိုလည်း လေလံပစ်နေသလား ထင်ရလောက်အောင် ဟိုလူနဲ့ဘာလိုလို ..ဒီလူနဲ့လည်း ဘာလိုလို ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ.....ပြေတီဦးဆိုရင်လည်း အူဝဲနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး သမီးလေးတစ်ယောက်ကို မွေးထားတာ မကြာသေးပါဘူး..သူတို့မိသားစုက အခုမှ ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစု တစ်ခုကို စကြမယ်ရှိသေးတယ် အခု ဒီသတင်းကြောင့် အူဝဲ နှင့် ပြေတီဦး ကြားမှာ ဘယ်အထိ အဖုအထစ်မရှိ လျှောက်လှမ်းနိုင်မလဲဆိုတာ ပရိတ်သက်တွေအနေနဲ့ စောင့်ကြည့်ရုံပဲရှိပါတော့တယ်.
သတင်း-- Chit Coco မှကူးယူဖော်ပြသည်
Kachin Guy and 32 others like this.
Shwe May May ခရိုနီသားတွေနဲ.လဲရှုပ်တာဘဲ၊တစ်ကယ်.စောက်ရှုပ်ပါ
Thiri May အနားမှာရှိတဲ့သူကိုတန်ဖိုးထားစေချင်ပါတယ် ကိုပြေတီဦး ဒါမှမဟုတ်မအူဝဲပဲ ၀ဋ်လဲနေ တာလား၊ ဒါပေမဲ့ ၀ဋ်ဆိုတာ တစ်ပတ်လည်တတ်ပါတယ် ကိုပြေတီဦး နဲ့ မ၀တ်မှုန်
သူများယျောကျာ်းကိုလု တဲ့သူ တိရစ္ဆာန်နဲ့တူယျောကျားရှားနေလား
အနုပညာ ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ အနုပညာမောင်နှမ(သူတို့ပြောပြောနေကျ) တွေကပဲ အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုနေကြမှာပါ
မင်းပြောထားတြဲ့၉.၄.၂၀၁၃ Popular journal
ဒီနိုင်ငံမှာ လူမျိုးရေးနဲ့ ဘာသာရေးကအရေးမကြီးဘူး
soeko lay said...
lineပေါ်မှာဘဲဘယ်သူသိတာလိုက်လို့ ဆိုပေမဲ့ သူ့ နှမ
ဒါသူတို့ကိစ္စပါ မပြောကြပါနဲ့ ဒို့ကပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်ဘဲ
ကိုယ့် တန် ဖိုး ကိုယ် သိကြ မှာ ပါ။
29 June 2014 at 13:55
တချိန်တုံးကတော့ မအူဝူဝဲ ပဲပေါ့
သူတောင်းစားအပေါ်က ဟာတွေ ကစ်ကိုဘာမှမပြောနဲ့ မဟုတ်မဟပ် မနာလို့ တဲ့သူတွေ အပုပ်ချတာ
အခုက အိုကြီး အိုမ ကျားနာ ကြီးနဲ့
28 April 2016 at 17:17
၀တ်မှုန်ရွှေရည် နှင့် သတင်းအပေါ် ပြေတီဦး ကို ယုံကြည်စ...
မျိုးဆက်သစ်များအတွက် နိုင်ငံတည်ဆောက်ရာမှာ ဒီလူတွေ ...
ကျေးဇူးပြု၍ share ပေးကြပါခင်ဗျာ---- မြင်းခြံမြို့၊...
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ကျော်ဇော တရ...
၂၇နှစ်ကြာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံ...
ထူးကုမ္ပဏီရဲ့ အကြီးအကဲဖြစ်သူ ဦးတေဇရဲ့ တူယာဉ်တိုက်မ...